Inhloko Zendaba Mabasa 08, 2022
*** Umumo ubungamanga kuhle kulokufuthelana okukhulu emhlanganweni owenzelwe emzini owe Diepsloot, kwele South Africa, lapho okubulewe isizalwane seZimbabwe izolo emadabukakusa. Lumhlangano ubukhokhelwa ngumpathintambo wogatsha lwamapholisa umnumzana Bheki Cele, obona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Motsoaledi lezinye iziphathamandla zikahulumende, bonke abasole udlakela lokubandlulana ngobuzwe.
*** Abamabandla aphikisayo ezombusazwe e Zimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola uhulumende ngokuvota bengasekeli ukuxotshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba eye UN Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine kanye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. Ele Zimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi yezwekazi ye Africa kuSADC elivote lisekela ele Russia ngoba amanye amazwe awe SADC ekhethe ukungavoti esekela loba ukungasekeli.
*** Umqeqetshi weqembu lenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu uthandazela ukuba umdlali olimeleyo uNqobizitha Masuku abe esesilile ngeSonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranborne Bullets.
*** Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zeJazz, uThandy Dlana yena ucula ekoBulawayo.
***KuLivetalk sikhangela okwenziakala kwele South Africa okubulewe isizalwane seZimbabwe emzini owe Diepsloot, ngesihluku sokugongodwa ngamatshe qede lapho satshiswa.